Magit a Git interface na Emacs ruru nsụgharị 3.0 | Site na Linux
Magit a Git interface na Emacs ruru nsụgharị 3.0
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ya na Git ị nwekwara ike ịrụ ọrụ n'okpuru Emacs, Ngwa na-esonụ nwere ike ịmasị gị. A na-akpọ ngwa anyị ga-ekwu maka taa Magit, interface Git na Emacs nke na-emesi njikarịcha arụmọrụ.
A na-eji obere igodo obere akpọku iwu na ihe ncheta na gaa na akaụntụ cursor ọnọdụ nke ukwuu actionable interface iji nye akparamagwa agwa gbara ya gburugburu. Magit bụ interface ederede dabere na Git. Ọ na-ejikọ ọdịiche dị n'etiti interface-line interface Git na GUI dị iche iche, na-enye gị ohere ịme ọrụ nchịkọta nke ọma na nke dị ntakịrị site na pịa nke igodo igodo ole na ole.
Magit ọ dị ka ụdị ka mma nke ihe ị nwetara mgbe ị gbasịrị ụfọdụ iwu Git, ma na Magit ihe ọmụma ọ bụla a na-ahụ anya na-arụkwa ọrụ ruo n'ókè nke gabigara ihe ọ bụla Git GUI na-enye. Ọ na-elekọta nke na-akpaghị aka emelite a mmepụta. mgbe ọ gaferela. Na ndabere, Magit na-agba naanị iwu Git, ma ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ịhụ ihe na-agba ọsọ, ọ na-eme ka ọ dị mfe ịmụta usoro iwu Git na Magit.
Magit na-akwado ma na-eme ka ọrụ Git rụọ ọrụ na ọtụtụ ndị ọrụ na ndị mmepe nke ndị ahịa Git ndị ọzọ enweghị ike ịpụta n'ụzọ ezi uche dị na ntanetị na-enweghị iwu. Magit dị ngwa karịa karịa karịa usoro iwu ma ọ bụ GUI ọ bụla, nke ahụ metụtara ma ndị mbido ma ndị ọkachamara.
Imirikiti ndị nwere ike ịmaghị Magit. Ndị ọzọ nwere ike ịma maka ịdị adị ya, mana ha agaghị atụle ịtụle ya n'ihi na etinyere ya dịka mgbakwunye nke editọ ederede Emacs.
Jonas Bernoulli kwuru na ya chọrọ ịgbanwe echiche a banyere Magit.
"Nke a bụ ihe m na-ezube ịgbanwe n'afọ na-esote ka m chere na Magit nwere ike ịbụ nnukwu ihu Git ọbụlagodi ndị ọrụ nke ndị editọ na IDE ndị ọzọ. Enwere m mmetụta nke ọtụtụ ndị ọrụ Git chọrọ, ma ọ bụ opekata mpe, ga-enwe ekele, ihe dịka Magit. "
Usoro mmụta mmụta Magit dịtụ larịị, ọ bụrụhaala na mmadụ amatala Emacs na Git. Enweghị ihe ọmụma tupu Emacs, usoro ahụ dịtụ elu.
Agbanyeghị, ewezuga eziokwu ahụ na Magit adịchaghị mma n'anya nke mbụ, isi ihe na-egbochi ndị ọrụ nwere ike ịnwale ya bụ usoro mmụta (ezigbo ma ọ bụ nke a ghọtara) (na nwute na aha aha) Emacs N'ezie, ndị ọrụ Emacs chere na mgbochi a bara uru ịgafe, mana ọ gaghị enyere ma ọ bụ kwenye onye ọ bụla na-ezube ịrapara na onye nchịkọta akụkọ ha ma ọ bụ IDE ma chọọ ịnwale Magit.
Banyere Magit 3.0
Nke akwukwo ndi edeputara na nke ohuru a, isi ngbanwe bụ na menus emezigharị kpamkpam nke a na-eji ahọta arụmụka ma kpọkuo iwu nsonye. Magit jiri ngwugwu na-agafe agafe iji mepụta menus ndị a.
A na-ekesa Magit-Nkebi n'adabereghị na Magit, ikwe ka ngwungwu na-agbasaghi iji ya mejuputa nchekwa dika nke Magit. N'adịghị ka Na-agafe agafe, a ka debere ya na ebe nchekwa Magit, ma ọ na-abịazi akwụkwọ ntuziaka ya.
N'otu aka ahụ, Magit ekwetaghịzi na isi ụlọ ọrụ a na-akpọ nna ukwu. Enweghị nhazi ọ bụla, Magit na-anwale isi, nna ukwu, akpati na mmepe n'usoro ahụ wee jiri nke mbụ dị na ebe nchekwa dị ugbu a dị ka ngalaba isi.
Magit dị iche na ihu Git ndị ọzọ, yana uru ya apụtaghị ozugbo na nseta ihuenyo ole na ole. “O di nwute, otutu ndi nwere ike amaghi ihe banyere Magit. Ndị ọzọ nwere ike ịma maka ịdị adị ya, mana ha agaghị atụle ịnwale ya n'ihi na etinyere ya dịka mgbakwunye nke editọ ederede Emacs, nke ahụ abụghị ihe ha na-eji.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere ike inwe ike ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa dị na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Magit a Git interface na Emacs ruru nsụgharị 3.0
HOS-P1: Explonyocha nnukwu oghere Huawei Open - Nkebi 1